ဓါးထိုးခံရပေမယ့် Pokemon Go ကို ဆက်ကစားပြီး ကုသမှုမခံခဲ့တဲ့ လူငယ် | Buzzy
ဓါးထိုးခံရပေမယ့် Pokemon Go ကို ဆက်ကစားပြီး ကုသမှုမခံခဲ့တဲ့ လူငယ်
ဂိမ်းမပြီးသေးလို့ ဆိုပြီး ရှစ်ချက်လောက် ချုပ်ရမယ့် ဒဏ်ရာကို ဆေးမကုပဲ ဆက်ကစားနေတာပါ
လက်တလောမှာ စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေကြား အထူးရေပန်းစားနေတဲ့ Pokemon Go ရဲ. သတင်းတွေထဲမှာ ဒီကောင်လေးရဲ. သတင်းလည်းပါပါတယ် ။ သူကတော့ ဓါးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမယ့် ဒဏ်ရာကို ဆေးကုသခြင်း မပြုပဲ ဂိမ်းကိုသာ ပြီးဆုံးအောင် ဆော့ပြီးမှ ကုသခဲ့ပါတယ်တဲ့။
အသက် ၂၂ အရွယ် မိုက်ကယ်ဘိတ်ကာဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ အိုရီဂွန်မှာ နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Pokemon Go ကို နှစ်ခြိုက်စွာ ကစားသူတစ်ဦးပါ ။ ဂိမ်းရဲ. ထုံးစံအတိုင်း ပိုကီမွန်ဖမ်းဖို့ အပြင်ထွက်လာချိန်မှာ သူက လူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ပြီး လူစိမ်းကို Pokemon Go ကစားသူတစ်ဦးပဲ ထင်ပြီး စကားသွားပြောရာမှ ပုခုံးကို ဓါးနဲ့ အထိုးခံရတာပါ။
ဒါပေမယ့်လည်း ဒီဓါးထိုးခံရတဲ့ ဒဏ်ရာကို သူက ဆေးမကုပဲ Pokemon Goကိုသာ ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်း ဆော့ပြီး နောက်နေ့မနက်ကျမှ ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ပါတယ်တဲ့။